Maka Sary Ny Ranomandry Fanombohan’ny Vanim-potoana Ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2015 9:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Italiano, Español, Aymara, 日本語, English
@GaryLewisUN no tompon'ity sary ity. Ririnina ao #Tehran
Tamin'ny Alatsinainy 7 Desambra, nifoha tambanin'ny oram-panala fotsy mangatsiatsiaka ny Iraniana ao avaratry ny firenena.
Misy ny fahadisoana fahita mahazatra amin'ireo tsy mbola zatra ny firenena mihevitra fa i Iran dia ao anatin'ny faritra mafana na mitovy amin'ny tany efitra ny toetr'androny. Raha ny marina, manana vanin-taona efatra i Iran. Ny renivohitra Tehran dia voahodidin'ny tandavan-tendrombohitra Alborz , izay mirehareha amin'ny fananany toeram-pilalaovana ski tsara indrindra mandritra ny ririnina.
Tsy fahita firy ao Iran ny oram-panala amin'ny volana desambra mialoha ny fanombohan'ny ririnina amin'ny fomba ofisialy. Raha ny marina, ny nilatsahan'ny orampanala mavesatra farany dia tamin'ny volana Febroary 2014, rehefa nakatona noho ny toe-javatra tsy mahazatra ny lalana. Tsy fahita ao Iran ny fisian'ny orampanala mirotsaka be dia be hany ka nambara fa latsaka an-katerena ny firenena nandritra ny roa andro tamin'ny Janoary 2008, nampikatona an'i Tehran, renivohitry ny firenena.
Ny orampanala voalohany tamin'ny taona dia narakitry ny maro tao amin'ny media sosialy. Namoaka sary hoan'ny namany ivelan'i Iran hankafy hatsaran-tarehin'i Tehran voalalotra fotsy i Gary Lewis, mpandrindran'ny Firenena Mikambana ao Iran.
Averina indray tao anatin'ny andro vitsivitsy, Tehran tsy tahaka ny fahita azy hatramin'izay. Ry namana/mpiara-miasa any am-pielezana, ankafizo azafady
Namoaka sary hazo voafono ranomandry ao Tehran, manoritsoritra azy ho “ranomandry vaovao, fotoam-pifalian'ny mpianatra” ilay tanora zafikelin'ny mpanangana ny Revolisiona Islamikan'i Iran tamin'ny 1979, Ahmad Khomeini.
Ny 7 Desambra dia androm-pirenena ho fahatsiarovana ireo mpianatra maty tamin'ny fifandonana tamin'ny 1953 tao amin'ny Oniversiten'i Tehran nataon'ny polisy avy amin'ny fitondrana teo aloha nentin'ny tarana-panjaka Pahlavi.
Iraniana mpisera Instagram iray hafa, Babak Rahimi, namoaka fijery tsara ijerena an-tsary ny Tilikambon'i Milad, ao Tehran nanapika izany tamin'ny diezy “#snow! “#fall-y”.
Raha hanaraka ny sarin'ny media sosialy ao Iran tamin'ny andro voalohany nirotsahan'ny ranomandry ity dia araho ny diezy #برف (#ranomandry) ao amin'ny Instagram.